Maamulka gobolka Sh/Hoose oo ku amray hey’adaha samafalka iney is diiwaangeliyaan – Radio Muqdisho
Maamulka gobolka Sh/Hoose ayaa ku amray hey’adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi iney isku soo diwaan geliyaan muddo 15 cisho gudahooda.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Afgooye Ismaaciil Aadan cadow iyo Cabdullaahi Maxamuud Magan oo ah madaxa samafalka degmada Afgooye oo shir jaraa’id ku qabtay Afgooye ayaa sheegay in hey’adaha samafalku aysan ka howlgeli Karin degmadaasi haddi aysan warqad ruqsad ah kala iman maamulka gobolka Sh/Hoose.
Mas’uuliyiintan ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa xusay in xiriiriyaha samafalka ee gobolka Sh/Hoose uu xafiis ka furtay degmada Afgooye, iyagoo intaa ku daray in hey’addi an heysan diwaangelinta heer gobol iyo heer degmo aysan iman karin degmada Afgooye.
Xiriiriyaha hey’adaha samafalka ee gobolka Sh/dhexe Cumar Fareey Muuse oo xafiis ka furtay degmada Afgooye ayaa ugu baaqay hey’adaha samafalka ee ka howlgala gobolka iney 15 cisho gudahood isku soo diwaan geliyaan haddii kale an loo ogolaan doonin iney ka shaqeeyaan gobolka.
Taliska ciidanka Asluubta oo dalbaday in la banneeyo xarumihii Asluubta ee gobollada Sh/dhexe iyo Hiiraan